फेवाताल बचाउने ड्याम बाढीले बगायो - dautarimedia.com
फेवाताल बचाउने ड्याम बाढीले बगायो
sanjay July 8, 2021 1 min read
२४ असार, पोखरा । फेवातालमा वर्षेनि जम्मा हुने गेग्य्रान रोक्न भन्दै पोखरा महानगरले बनाएको सिल्ट्रेसन ड्याम बाढीले बगाइदिएको छ । पोखरा २३ स्थित हर्पनखोलामा बनेको ड्याम निर्माण पूरा भएको दुई वर्ष नपुग्दै बाढीले बगाइदिएको हो ।
‘राति आएको बाढीले ड्याम नै बगाइदियो । बढेको पानी अहिले ठूलाखेतको बस्तीमा छिरिसक्यो’ पोखरा २३ का वडाध्यक्ष भरतराज भण्डारी भन्छन्, ‘मान्छेलाई अहिलेसम्म केही क्षति पुर्‍याएको छैन । तर, बस्तीका ६ घरलाई भने क्षति पुर्‍याउन सुरु गरिसक्यो ।’
हर्पन खोला फेवातालको मुख्य मुहान खोला मानिन्छ । हर्पनजस्तै तालका अन्य सहायक मुहानहरुबाट वर्षेनि १ लाख २४ हजार मेट्रिक टन गेग्य्रान फेवा पुग्ने तथ्यांक छ । तिनै गेग्य्रान रोक्ने र ताल बचाउने भन्दै महानगर र प्रदेशले दुई वर्षअघि ड्याम बनाएका थिए ।
फेवा मुहानका विभिन्न खोलामा ५ वटा सिल्ट्रेसन ड्याम बनेका छन् । २०७६ पुस महीनादेखि शुरु गरेको बाँध बनाउने काम १५ महीनाभित्र सक्ने सम्झौतासहित सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण शुरु भएको थियो । गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरको संयुक्त २८ करोड १६ लाख रुपैयाँमा ती ड्याम बनेका हुन् ।
फेवा मुहानका बेत्यानी खोलामा दुई वटा, खहरे खोला, घाँटीछिना र लौरुक खोलामा एक/एक गरी पाँच वटा ड्याम बनाउने गरी पोखरा २४ स्थित बेत्यानी खोलामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले शिलान्यास गरेका थिए ।
शुरुदेखि ‘कच्चा माल’, विरोधमा थिए स्थानीय
पोखरा २३, हर्पनमा बगेको उक्त ड्याम खड्का कृष्ण/पि.के जेभी दाङले निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । जेभीसँग ७ करोड ८८ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा ड्यामको निर्माण सम्झौता गरिएको थियो।
२०७६ पुसमा निर्माण शुरु भएको उक्त ड्याम बनाउन शुरु गरेदेखि नै विवादित थियो । निर्माण शुरु गरेको दुुई महीना नबित्दै सामान्य हातले छुँदा पनि भत्किन शुरु गरेपछि स्थानीयले विरोध नै गरेका थिए । छिटो सक्ने नाममा कच्चा सामग्री प्रयोग गरेको र त्यसले बस्ती जोखिममा परेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए ।
बनिनसक्दै ‘प्लास्टर’ उप्किन शुरु गरेपछि प्रदेश सभामै यसबारे कुरा उठेको थियो । तर, प्रदेश र महानगर दुवैले ड्यामको गुणस्तरमा ध्यान नदिंदा बाढीले बगाएर बस्ती नै डुबानमा परेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
पोखरा २३ का जनप्रतिनिधि स्वयं आफ्नो वडामा सिल्ट्रेसन ड्याम बनाउँदासमेत आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए । ‘म बाँधको विरुद्ध बोलेको थिइनँ । तर, बनाइसकेपछि बलियो बनाउने, राम्रो प्लास्टर त गर्नुपर्‍यो नि !’ अनलाइनखबरसँग वडाध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘त्यसले बस्तीलाई क्षति पुर्‍याउँछ भनेर विरोध गरेका हौं ।’
ड्याममा जम्मा भएको गेग्य्रान समयमै निकाल्न नसक्दा दुर्घटना हुन पुगेको वडाध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । ‘शुरुमा स्थानीयसँग गरिएको सम्झौताभन्दा अहिले बाँधको क्षेत्र बढाइयो । समयमै त्यहाँ जम्मा भएको गेग्य्रान उठाउन पनि भनेका थियौं । नगर्दा यस्तो भयो’ उनले भने ।
ड्यामका ढुंगा, बालुवा बेच्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई
कुल २८ करोड लगानीमा बनेका ती पाँच वटा सिल्टेसन ड्यामबाट शुरुआती समयमा महानगरले वार्षिक २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । बाँधमा जम्मा भएका ढुंगा, बालुवाजन्य पदार्थ बेच्ने र आर्थिक आम्दानी गर्ने महानगर र प्रदेश दुवैको योजना थियो ।
तर, हाल आएर ती सिल्ट्रेसन ड्याम निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) योजनाअन्तर्गत महानगरले २४ वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थ बेच्ने अधिकार ‘फेवा सिल्ट्रेसन प्रालि’ नामक निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय पोखरा महानगरको ४९ औं कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको हो ।
Previous: युनियन लाइफको आइपीओ निष्काशन, कति कित्ता भर्ने ?
Next: रहस्यमय बन्दै टिकापुर घटना!!exclusive vedioयो बच्चाले कस्को के बिगार्यो सरकार उत्तर चाहियो जनतालाई